Nepali love shayari and love quotes for girlfriend- 2020 - loveshabd.com
Nepali love shayari and love quotes for girlfriend- 2020
Hello readers, We are very excited to inform you that we have added another category for shayari and that is Nepali shayari which includes various nepali sad shayari , Nepali love quotes ,nepali love shayari for girlfriend or wife and quotes and more Nepali shayari specially for the readers from nepal and some folks who know nepali language.
तिमीलेे मलाई आफ्नो हाथ मा ताबीज बनाइ राख,
म तिमीलाई हरेक समस्या सगँ बचाइ रहने छु।
कहिलेकाँही आराम को लागि पनि
कुनै औषधि आवश्यक पर्दैन तर
कसैको शब्दहरू आवश्यक पर्दछ।
सानो कुरा बाट तिमी म सँग झगडा गर्दै छौ।
लाग्छ कि तिमी म सँग थाहा नपाई माया गर्दै छौ।
दुरी चाहन्थ्यो हामी, जिवनसाथी बनेर आयौ,
जब हामीले दुरी चाहयौं तब हामी
पहिला भन्दा झन नजिक आइपुग्यो।
आज क्रोधित छे भोलि सहमत हुनेछे,
जिवन हो प्रिय सानो छ।
New Nepali shayari for love
तिमीले आफ्नो केस लाई यसरी उल्झाइदौँ की,
म सुल्झाउँ यसलाई बिहानी देखि र फेरि रात बितोस।
तिनीहरू भन्छन कि मैले तिमीलाई कहिले रुआए भने ?
मैंले भने कि मलाई डर लाग्छ कि तिमी मेरो आँसुमा भिजाउने छौँ।
तिमी किन चाहन्छौं कि म तिमी हुने आऊँ।
हेरु मुस्कुराउ र म यसरी नै बदनाम भइराखु।
पुरा भिड‌ ले तालि बजाएनि या नबजाएनि त के भयो।
तर तो एक मान्छे ले मुस्कुराए दिए पर्याप्त हुने छ।
तिमी श्रिवेणी को त्यो घाट हौ।
जसलाई छुनको लागी मलाई सानो नदि नै बन्नुपर्छ।
न चन्द्रमा चाहिन्छ न त आकाश चाहिन्छ
मलाई त केवल तिम्रो एक झल्को चाहिन्छ।
माया को एउटा अनौठो अनुकम्पा देखे
तिमीलाई नै देखे असाध्यै देखे।
heart touching shayari in nepali
चाहना हुँदैन कसैको उमेर को भर तर
केही दु:ख र पिडा सहन को लागि जिवन मा सास पनि कमै पर्छ।
निद्रा लाग्ने औषधि अवश्य होला
र नआउने को लागि एक मात्र माया नै छ।
सपना मा रहनै राम्रो हुन्छ
सपना पूरा होस् यहि कामना गर्छु।
धेरै दिन पछि आयेको छु तिम्रो बाटो मा
विश्वास नभए सोध त्यो मुटु लाई त्यसले भन्ने छ।
चिन्ता ले भनिरहेछ प्रेम जिउँदै छ
दुरी बाट यति घमण्ड न गर म तिमी हुने फकी आउने छु।
Nepali short shayari
अत्यन्तै पर्खिरहेको छु त्यो प्रश्न को जवाफ को लागि,
जसको उत्तर उसलाई स्वीकार्य नै छ।
वर्षा मा नै रहेको छ जिवन
फेरि किन भन्ने गर्छन फेरि भेटौला।
आश्चर्य भए थे जुन यति नजिक बाट देखेर पनि
चित्र भए आज फेरि मेरो चित्र देखेर फेरी चित्र भए।
मात्र यति आराम छ जिवनमा
दुरी मा रहेर पनि तिमी मेरो मुटु को धेरै नजिक छौ।
love shayari in nepali new nepali shayari nepali sad shayari ,nepali shayari photo nepali love shayari for girlfriend nepali shayari love story , nepali shayari in english nepali status love new nepali love shayari nepali love story shayari, nepali shayari ,nepali status shayari nepali attitude shayari nepali joke shayari new nepali shayari nepali romantic shayari nepal ki shayari new nepali shayari 2018 new nepali love shayari photos nepali heart touching shayari , nepali short shayari.
For love shayari in hindi click
Follow us on insta for Attitude quotes in english
TaggedBest nepali shayariMaya nepali shayariMero mayaNepali love quotesNepali love shayariNepali love shayari for girlfriendNepali love smsNepali love statusNepali shayari for fbNepali shayari on loveNepali short shayariNew sad shayari 2020shayari
Previous Article two line shayari collections in hindi for shayari lovers
Next Article akelapan shayari & status in hindi- अकेलापन शायरी 2021